Ihe omuma ohuru maka Instagram: gafere 600 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ | Gam akporosis
Ọfọn, ọ dị ka ụmụ okorobịa na-akpata mmepe nke Instagram ga-enwe ihe a ga-eme ekeresimesi a na ozi ọma a anyị na-arụ. Ndị otu mmepe na-anabatakarị ọnụọgụ ntọala ndị ahụ, ọ bụ ezie na ndị na-aga n'azụ Allo enweghị ọtụtụ ọ soụ, ma na-enwekwu nchekasị.
Ọ bụrụ na ụbọchị ole na ole gara aga, Instagram webatara gụgharia vidiyo na ozugbo ephemeral (ha na-azoputaghi) na ụnyaahụ ihe bụ nhọrọ nke nwee ike ịchekwa maka oge ọzọ tiketi anyị chọrọ, taa, ha nwere ozi ọzọ dị ukwuu. Ọ bụ Instagram n'onwe ya kwuputara na ha eruola gafere 600 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ kwa ọnwa n'ụwa niile, ma ọ bụ ihe bụ 10% nke ndị bi n'ụwa.
Ihe dị ka nde mmadụ isii ahụ 100 karịa ụlọ ọrụ ahụ nwetara nanị ọkara afọ gara aga mgbe ha kwupụtara ọkwa dị mkpa nke 500 nde. Ọ bụrụ na anyị lelee ọnụọgụ gara aga nke 400 nde, o were Instagram naanị ọnwa 9, yabụ uto ya na-agbatị oge, ọbụlagodi mgbe anyị na-ekwu maka ikpo okwu nke nwere nnukwu ọrụ.
Instagram egosila na ọ na-eme ọfụma na mba ndị Eshia, mpaghara ebe ha chọrọ ka ọghọm dị ukwuu karịa ya. Ihe kachasị mma na atụmatụ ụfọdụ nke ngwa ahụ enyerela aka melite ọnụọgụ ndị ahụ. "Akụkọ" kwere ọtụtụ ndị ọrụ na-enyocha Instagram ugboro ugboro na algorithm ahaziri iche mere ka o kwe omume ịhụ ihe onye ahụ nwere mmasị na ya; ihe ọ ga - enweta ma na - abawanye na ọ laghachi ugboro ugboro na ngwa ahụ.
Agbanyeghị otu njirimara nke ga - enyekwu nku na Instagram bụ ikike rụọ ndụ gụgharia site na ngwa ahụ n'onwe ya. Gụgharia nke na-echekwaghị na nke ahụ ka bụ ihe ephemeral. N'ụzọ dị otú a, ọ na-ekewapụ onwe ya na Facebook, ebe a na-echekwa Live maka egwu ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Instagram na-agafe 600 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ kwa ọnwa
Etu esi wụnye Alcatel's Onetouch Launcher na gam akporo ọ bụla